မီတာ Archives - ThutaSone
လစဉ် ၅၀၀၀၀ ကျော်ကနေ ၂၅၀၀၀ ကျော်ပဲကျပါတယ်မီတာခတွေ ပိုကျနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မဒီလိုသုံးပါတယ်
August 21, 2019 ThutaSone 0
လစဉ် ၅၀၀၀၀ ကျော်ကနေ ၂၅၀၀၀ ကျော်ပဲကျပါတယ်မီတာခတွေ ပိုကျနေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မဒီလိုသုံးပါတယ် သူများတွေ မီတာစာရွက်အကြောင်းလေးတွေ ပြောနေကြလို့ပါ ကျွန်မ အိမ်ရဲ့မီတာခက လစဉ် ငွေ၅သောင်းနီးနီးကျတဲ့အတွက်မီတာခတွေ တိုးကောက်မယ် သုံးဆတက်မယ်ဆိုတော့ သိန်းချီပေးရတော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်အတော်ညစ်သွားချိန်မှာအိမ်ကို မီတာလာဖတ်တဲ့ စာရေးလေးက အကြံပေးသွားတာက အစ်မ သုံးတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေကို […]
လျှပ်စစ်ဘယ်​​လောက်​သုံးရင်​ မီတာ (၁) ယူနစ်​ ကျမလဲ?
June 29, 2019 ThutaSone 0
လျှပ်စစ်ဘယ်​​လောက်​သုံးရင်​ မီတာ (၁) ယူနစ်​ ကျမလဲ? မီတာ ၁ ယူနစ်ဆိုတာ… 1 KWH ၁ ကီလိုဝပ်နာရီ ဆိုလိုတာက တနာရီအကြာကာလမှာ ၁ ကီလိုဝပ်(1000 ဝပ်) သုံးစွဲလိုက်ရင် ၁ ယူနစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အလင်းရောင်ရဖို့ မီးသုံးစွဲမှုကို အကြမ်းဖျဉ်း တွက်ကြရအောင်။ […]
မီတာ Bill လာရင် သုံးတဲ့ယူနစ်နဲ့ မီတာပုံးက မီတာယူနစ် မှန် မမှန် တိုက်စစ်ကြပါတော့
June 27, 2019 ThutaSone 0
မီတာ Bill လာရင် သုံးတဲ့ယူနစ်နဲ့ မီတာပုံးက မီတာယူနစ် မှန် မမှန် တိုက်စစ်ကြပါတော့ မီတာခတွေ ဘယ်လောက်ကျမလဲတွက်နေတာထက် အခုချက်ချင်းလုပ်ဖို့ လိုတဲ့ အရေးကြီးအလုပ်တခုလျှပ်စစ်မီးသုံးတဲ့ အိမ်တိုင်း လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဖတ်သင့်ပါတယ်။ ၆ လပိုင်း မီတာ Bill လာရင် မီတာစာရွက်က မီတာယူနစ်နဲ့ မီတာပုံးက မီတာယူနစ် […]